प्रकाण्ड र प्रहरीबीच मुसा बिरालोको खेल ! विप्लवको खासै प्रतिक्रिया देखियन । – www.agnijwala.com
प्रकाण्ड र प्रहरीबीच मुसा बिरालोको खेल ! विप्लवको खासै प्रतिक्रिया देखियन ।
प्रकाण्ड र प्रहरीबीच मुसा बिरालोको खेल भइरहेको छ। केही दिनदेखि यो नौटंकी जारी छ। फेरि पनि त्यही नौटंकीको अर्को एउटा भाग देख्‍न पाइयो। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’को पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता तथा पूर्वमन्त्री प्रकाण्डलाई रिहा गर्न आदेश दियो। रिहा भएपछि सर्वोच्च अदालतको गेटबाट निस्कन पाएको छैन, प्रहरीले फेरि पक्रियो। एक जमानामा एउटै पार्टीमा रहेका बादल गृहमन्त्री हुँदा विप्लव पार्टीका प्रवक्ता यसरी दोस्रो पटक अदालतको गेटबाटै पक्राउ परेका हुन्। यसअघि हालका गृहमन्त्री सशस्त्र संघर्ष गरिरहँदा पनि त्यतिबेलाको सरकारले यसै गर्थ्यो।
सुरुमा प्रहरीले उनलाई जबर्जस्ती चन्दा उठाएको आरोपमा पक्रेको थियो।
उनका छोराले पुनः बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हाले। त्यसमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले पुनः फेरी उनलाई रिहा गर्न आदेश दियो। उनी सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिँदै गर्दा पुनः प्रहरीले पक्रियो। यस पटक भने भोजपुर जिल्लामा भएको बम विष्फोटको घटनामा समेत संलग्न रहेको भन्दै उनलाई पक्राउ गरियो। अब उनलाई भोजपुर पठाइनेछ। शायद् फेरि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट पर्नेछ। कहिलेसम्म यो मुसा बिरालोको खेल चल्ने हो, थाहा छैन।